Balotelli Oo Lagu Dhex Aflagaadeeyey Xerada Tababarka Xulka Italy
HomeHoryaalladaBalotelli Oo Lagu Dhex Aflagaadeeyey Xerada Tababarka Xulka Italy
Weeraryahanka xulka qaranka Italy, Mario Balotelli ayaa si xun oo jinsi nacayb ah loogu dhex aflagaadeeyey xerada xulka qaranka Talyaanigu isugu sii diyaarinayo koobka aduunka ee duleedka magaalada Florence Arbacadii.
Koox dhallinyaro ah ayaa ku soo tuuray erayo cay ah oo ay midabkiisa ku durayaan, weerarahanka Ac Milan oo markaas wareegaya orod ay ciyaaryahanada xulku samaynayeen kuna wareegayeen xerada Coverciano oo ay tababar ku dhex samaynayeen.
Balotelli ayaan u joojinin isla markaana aan laga dareemayn wax dhib ah oo ay ku keentay aflagaadadaas balse xidigaha xulka Talyaaniga ayaa ku tilmaamay wax aan loo dulqaadan Karin dhacdada lagula kacay saaxiibkood.
Dario Nardella, oo ah maayarka magaalada Florence, ayaa tilmaamay sida uu uga xumaaday falkaas lagula kacay ciyaaryahanka xulka qaranka.
Waxaanu isagoo arinaas ka hadlaya yidhi: “Waxay ahayd hadalo aflagaado ah oo aan loo dulqaadayn karayn, kuwaas oo lagu maagay Balotelli. Waanay ka sii xumaan doontaa xataa haddii qof kali ahi ku hadlayay.
“Florence waxay ka soo horjeedaa midab kala sooca, waxaanay dhiiri gallisaa, qadarinta, aqoonta iyo dhaqanka suuban.”
Ciyaaryahanka ay Balotelli ka wada tirsan yihiin xulka Italy ee Ciro Immobile ayaa isna ku tilmaamay dhaqan xumo iyo ceeb dhacdadaas laakiin amaanay qaabkii uu u dhaqmay ciyaaryahanka hore ee naadiga Manchester City oo naftiisa xakameeyey.
Shir jaraa’id oo kooxdu qabatay isagoo ka hadlayana waxaa kamid ahaa hadaladiisii: “Sanadkan 2014, ma dhagaysan karno erayada jinsi iyo midab takoorida ah.
“Waa inaan cadaynaa inaan qaran nahay. Nasiib wanaag, Mario wuxuu ahaa mid aad u deggan.
“Waxaanu isku dayi doonaa inaanu kiis ku oogno si aanay dadka noocan oo kale ahi mardambe falkan oo kale u samaynin.
“Kama xishoonayo inaan Talyaani ahay,laakiin waxaan la murugooday oo I maan rogay hab dhaqanka noocan oo kale ah.”
Ryan Giggs Oo Sheegay Inaanu Seexan Habeenkii xallay ahaa oo dhan —- Tolow maxaa saamaleelka keenay
Manchester United Oo Kordhisay Lacagta ay Ku Dooneyso Sergio Ramos
Marcello Lippi Oo Cadho Is Hayn Waayay Garoonkana Soo Dhex Cararay Si uu Garsooraha Ula Dagaalamo